Booliska oo uga digay dadka sida qaldan u isticmaala numbarka caawinaada ee gaaban oo loogu… – Hagaag.com
Booliska oo uga digay dadka sida qaldan u isticmaala numbarka caawinaada ee gaaban oo loogu…
Wasaarada Caafimaadka Xukuumada Soomaaliya ayaa magacawday guddi dhakhaatiir ah oo loogu tala galay in bulshada ka wecyi galiyaan caabuqa Coronavirus sidoo kale lala soo socodsiiyo hadii ay jiraan dad isaga shakiyay caabuqan.
Guddiga badqabka bulshada ee cudurka Coronavirus ayaa loo sameeyay number gaaban ay bulshada kala xiriiri karaan hadii ay arkaan qof isaga shakiya cudurka Coronavirus, waxaa sidoo kale numberkaasi laga diraa fariimo wacyi galin ah.
Sida aan wararka ku helnay guddiga ayaa ka cawday dad si qaldan u wacaya numberkan gaaban , waxaana guddiga badqabka bulshada dacwo arrintaasi la xariirta u gudbiyeen Taliska Ciidanka Booliiska Soomaaliya.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliiska Soomaaliya Jeneral Zakiya Zuseen ayaa qoraal kooban ay soo saartay uga digtay bulshada isticmaalka qaldan ee numbarkan gaaban, waxa ayna cadeysay in talaabo laga qaadi doono cidii ku takri fashaa numberka caawinaada ee gaaban.
“Waxaan bulshada Soomaliyeed ugu digeynaa isticmaalka qaldan ee numberka caawinaada ee gaaban oo looga talagalay badqabka dad-weynaha halkaas ay si joogtaha u fadhiyaan dhakhaatiir bulshada ugu jawaabaya su’aalaha ay ka qabaan ifafaalaha lagu garto cudurka coronavirus (coronavirus symptoms). Hadaba qofkii ku takrafala isticmaalka numberka caawinaada ee gaaban waxaa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan.” ayey tiri Jen Zakiya.
Dowlada Soomaaliya ayaa wada dadaalo la doonayo in looga hortago in caabuqa Coronavirus oo dhibaato xoogan ku haya caalamka uu ku faafo Soomaaliya , waxaana kaliya la xaqiijiyay in laga helay coronavirus hal qof oo dibadda ka yimid.